Fitsaboana sy fanafody aretina sinus. SingleCare - Fanabeazana Ara-Pahasalamana | Desambra 2021
Orinasa Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fanatanjahan-Tena Mavesatra Vaovao, Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Pets Fahasalamana Zava-Mahadomelina Vs. Namana Lalao Orinasa, Vaovao Fialam-Boly Mpanao Gazety
Tena >> Fanabeazana Ara-Pahasalamana >> Fitsaboana sy fanafody amin'ny sinus
Fitsaboana sy fanafody amin'ny sinus
Inona no atao hoe aretina sinus? | Diagnostia aretina amin'ny sinus | Safidy fitsaboana voan'ny sinus | Fanafody voan'ny sinus | Fanafody aretina sinus tsara indrindra | Vokatry ny aretina sinus | Fanafody sinus fanafody ao an-trano | FAQ | Harena
Fantatry ny rehetra ny zavatra antenaina rehefa mihodinkodina ny vanim-potoana mangatsiaka sy alergia — antenaina orona feno setroka ianao, mangidihidy ny tendany ary mievina matetika. Fa raha miharatsy ny soritr'aretinao ary mahatsapa fanaintainana lava ianao, orona, aretin'andoha ary fitohanana amin'ny orona, dia mety hisy olana lehibe kokoa.
Rehefa tsy miala eo ny soritr'aretina mangatsiaka na allergy dia mety voan'ny aretina sinus izy ireo. Ampiasao ity torolàlana ity momba ny aretin-kibo sy ny fomba hitsaboana azy amin'ny fanafody sy fitsaboana hafa ao an-trano.
Inona no atao hoe sinus sinus (sinusitis)?
Ny aretin-kibo, fantatra koa amin'ny hoe sinusitis na rhinosinusitis, dia toe-javatra iray izay manjary mibontsina ireo sela misarona ny lalan'ny orona. Matetika ny aretin-lozatra, mahatratra olona manodidina ny 30 tapitrisa any Etazonia isan-taona, ary ny isan-jaton'ireo aretina ireo dia mivaha irery. Ny soritr'aretina sinusitis mahazatra dia misy ny fitohanana amin'ny orona, aretin-tenda, aretin'andoha ary fanaintainan'ny tarehy.
Raha nohazavaina tsotsotra, ny aretina sinus dia misy rehefa misy aretina ao amin'ny sinus , rafitra mifandray amin'ny habakabaka feno habakabaka ao anaty karandohany. Ao anatin'ny toe-javatra mahazatra dia mivoaka ny mucus mba hahafahan'ny rivotra mamakivaky ny lavaka sinus. Rehefa mitombo ny tsiranoka ao amin'ny sinus, dia mitombo ny mikraoba ary mety hisy ny aretina.
Ny aretin-sinus dia mety hiteraka tsy fahazoana aina amin'ny tarehy noho ny fitohanan'ny orona. Mety mahatsapa aretin'andoha ianao, fanaintainana ao ambadiky ny masonao, ary fahalemen'ny tarehy na fivontosana. Ny soritr'aretin'ny tsimok'aretina hafa dia mitovy amin'ny alàlan'ny sery mangatsiaka na mahery vaika ao anatin'izany ny fivoahan'ny orona, mitete postnasal, havizanana, tsindry sinus, famoizana fofona, fahasosoran'ny tenda, ary na tazo aza.
Matetika ateraky ny alèjia na ny sery, dia mety manana endrika maro ny aretina sinus. Ny sinusitis mahery dia mety miteraka soritr'aretina malemy ary lasa haingana tsy misy antibiotika. Ireo tranga ireo dia matetika ateraky ny aretina virosy toy ny sery mahazatra ary tsy mitaky zavatra hafa ankoatry ny fitsaboana simetrika ho fampiononana anao.
Ny sinusitis mitaiza kosa dia mety hipetraka mandritra ny volana maromaro ary hanakorontana kokoa. Miankina amin'ny hamafin'ilay aretina dia mety ho azonao atao ny mitsabo azy amin'ny fanafody ao an-trano, saingy azo inoana fa hanao izany ianao mila fitsaboana antibiotika .
Ny vondron'olona sasany dia inoana fa voan'ny aretina sinus. Raha mifoka ianao, mandeha any amin'ny haavo hafa, manana hery fiarovan'ny vatana malemy, rhinitis mahazaka, na fibrosis cystic, dia atahorana kokoa hiharan'ny aretina sinus ianao.
Ahoana no hamaritana ny sinusitis?
Raha miaina fanaintainana sy tsindry tsy mazava ianao ao anatin'ny herinandro ka hatramin'ny 10 andro, dia mety ho fotoana handaminana fotoana fanendrena dokotera. Azonao atao ny mitsidika ny mpitsabo anao voalohany mba hanombanana anao amin'ny aretina sinus.
Matetika ny aretina sinus dia voan'ny aretina empirika tsy mila fakana sary na kolontsaina, hoy ny fanazavany Lindsey Elmore , Pharm.D., BCPS. Ny fanadinana ara-pitsaboana tsotra sy ny famerenana ny soritr'aretinao dia tokony ho ampy mba hahalalan'ny dokoteranao fa misy ny aretina sinus. Azo inoana fa hizaha jiro amin'ny oronao ny dokoteranao hitadiavana fivontosana. Mety hanontany anao koa izy momba ny fanaintainana tsapanao raha toa ka miverina amin'ny valan'ny sinus.
Amin'ny tranga tsy fahita firy, na raha marary matetika ianao, dia mety hanao fitsapana hafa ny dokoteranao mba hialana amin'ny fepetra hafa toy ny aretin'ny holatra. Mety tafiditra ao anatin'izany ny fitsapana ny allergy, ny endoscopy nasal hijerena maso maso ny sinus, ny fametahana ny oronao amin'ny kolontsainan'ny fantsakan'ny orona, na ny sarin'ny laboratoara hijerena ireo zavatra tsy ara-dalàna.
Ny soritr'aretina dia mety ho maranitra (fotoana fohy) na maharitra (maharitra), ary tokony hangataka fanampiana amin'ny dokotera ianao raha sendra soritr'aretina maharitra mihoatra ny 10 andro, na tsy voavaha amin'ireo mpiasan'ny kaontera satria io dia mety ho fambara fa manana ianao aretin-kibo sinus, hoy ny Dr. Elmore.
Safidy fitsaboana voan'ny sinus
Betsaka ny safidy fitsaboana amin'ny aretina sinus, fa ny safidy fitsaboana tsara indrindra dia miovaova arakaraka ny hamafin'ilay tranga. Ny areti-nify sinus sasany dia hodiovina samirery nefa tsy misy fitsaboana, ary mety hieritreritra fotsiny ianao hoe sery izany. Ny sasany kosa mila fitsabahana matotra kokoa ataon'ny mpitsabo iray.
Ny mpitsabo mpanome fitsaboana mahazatra dia manome fanafody ny antibiotika. Na izany aza, raha manana aretina sinus ianao vokatry ny aretin-tratra toy ny sery mahazatra, dia tsy hanome fanafody antibiotika ny dokotera satria ireo fanafody ireo dia tsy mitsabo afa-tsy aretina mikraoba. Raha tokony ho izany dia azonao atao ny mitsabo ny aretin'ny sinus raha tsy mandra-pivoakany, miaraka amin'ny decongestants sy antihistamines.
Betsaka ny fomba fitsaboana ny soritr'aretin'ny sinus sinus ao an-trano miaraka amin'ny fanafody mihoatra ny fivarotana (OTC) sy ny fanafody ao an-trano. Ny antihistamines an'ny OTC dia manakana ny vokatry ny histamine, manampy ireo soritr'aretina toy ny sneeze sy ny orona mikoriana. Ny fitsaboana tsotra toy ny rano fisotro, mitazona hydraty ny sinus (miaraka amin'ny vokatra manasa orona), ary ny fampiasana compresses mafana, dia afaka manampy amin'ny fitsaboana ny soritr'aretin'ny aretina sinus.
Ny fitazonana ny lalan'ny oronao dia hadio hatrany amin'ny soritr'aretin'ny sinus. Raha heverinao fa manana olana amin'ny sinus mandritra ny allergie na ny vanim-potoana mangatsiaka, ny famafana ny lalan-dranonao amin'ny vahaolana rano sira dia afaka manampy anao hisoroka ny fanaintainan'ny aretina sinus.
Ny areti-nify miverimberina sy maharitra dia mety ho mariky ny olana matotra kokoa amin'ny firafitry ny sinus, toy ny septum mivadika na polyps nasal. Ireto olana ireto dia mety mitaky fitsaboana manokana amin'ny alerista, otolaryngologist, na dokotera hafa mba hialana amin'ny aretina sinus mitohy amin'ny ho avy.
Fanafody voan'ny sinus
Rehefa ilaina ny fanafody amin'ny fitsaboana aretina amin'ny sinus, dia misy safidy maro samihafa. Ny karazana fanafody voalohany ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretina sinus dia misy decongestants, antibiotika, steroid, antihistamines, ary fanafody anti-inflammatoire (NSAIDs).
Ny fanafody decongestant dia manampy amin'ny fampihenana ny fivontosana, ny tsindry ary ny fitohanana ao amin'ny vavony. Ny decongestants ho an'ny aretina sinus dia matetika amin'ny endrika tsiranoka orona toy ny Vicks Sinus Nasal Spray na Afrin Nasal Spray (samy misy oxymetazoline), ary pilina am-bava toa an'i Sudafed.
Ireo fanafody ireo dia afaka manampy haingana amin'ny fanalefahana ny tsindry amin'ny sinus, nefa tsy tokony ho raisina mandritra ny fotoana maharitra. Ny fampiasana tafahoatra orona orona decongestant dia mety mahomby tokoa miharatsy ny fitohanana , noho izany dia tokony mihinana ny tsirairay amin'ireto fanafody ireto ianao araka ny torolalan'ny dokoteranao. Ny fihoaran'ny orona dia mety ampiasaina mandritra ny 3 andro farafaharatsiny. Ny voka-dratsin'ireto tsindrona orona ireto dia misy fahasosorana, fahamainana, fandoroana, fanindronana ary fievohana.
Raha maina anao ny tsifotra orona decongestant dia azonao atao ny manisy tsiranoka orona masira na rano mitete hamandoana ny lalan'ny orona - ny vokatra masira dia azo ampiasaina raha ilaina nefa tsy voafetra ny faharetany. Ny takelaka oral decongestant nasal dia afaka mampiakatra ny tosidranao, koa raha manana tosidra ambony ianao dia manontania ny mpitsabo anao alohan'ny hampiasanao azy.
Amin'ny tranga maro, ny antibiotika dia tsy ilaina amin'ny aretina sinus, fa ny dokotera dia mety manome fanafody iray raha miahiahy izy ireo fa misy bakteria ny antony mahatonga ny sinusitis. Antibiotika mahazatra toy ny amoxicillin na cefdinir dia azo ampiasaina hanakanana ny fitomboan'ny na hamono bakteria hamahana ny aretina sinus.
Ny antibiotika malaza hafa natokana ho an'ny aretin'ny sinus dia ao anatin'izany ny Zithromax (azithromycin) na Augmentin. Ny voka-dratsin'ny antibiotika mahazatra dia misy fisaleboleboana, fandoavana ary fivalanana.
Ny Corticosteroids dia afaka manatsara ny fivoahan'ny sinus amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fivontosan'ny sinus. Matetika ny dokotera dia tsy manome fanafody afa-tsy ny steroid amin'ny aretina sinus. Ny steroid mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina sinus dia prednisone sy Medrol (methylprednisolone).
Fluticasone nasal spray dia zava-mahadomelina steroid izay azo vidiana lafo loatra (na amin'ny alàlan'ny dokotera) hanalana ny soritr'aretin'ny sinusitis. Flonase dia tsifotra orona orona malaza izay azonao alefa amin'ny vavorona tsirairay isan'andro mba hanamaivanana ny fitsentsitra sy ny orona ary ny fitohanana. Ny fampiasana lava maharitra ny steroid dia mety miteraka fikorontanana eo amin'ny haavon'ny hormonina ao amin'ny vatana, noho izany dia tokony horaisina fotsiny araka ny nanoroana azy ireo.
Ny tsimokaretina sinus maro dia vokatry ny alergie, noho izany ny antihistamines dia afaka manampy amin'ny fanadiovana tranga sinusitis amin'ny alàlan'ny fampihenana na fampijanonana ny fihetsika mahazaka aretina. Benadryl dia antihistamine OTC ampiasaina matetika izay afaka manamaivana ny sneeze, ny orona, ary ny soritr'aretin'ny aretina sinus. Ny voka-dratsy ateraky ny antihistamines dia misy fanina, vava maina ary fahamamoana.
Ny antihistamines vaovao toy ny Claritin, Allegra, Zyrtec, ary Xyzal, dia mitondra ireo soritr'aretina ireo ihany saingy miteraka tsy faharetana firy. Ny antihistamines sasany koa dia misy decongestant. Mangataha fanampiana amin'ny mpitsabo anao amin'ny fikajiana vokatra mety izay hanampy ny soritr'aretinao ary azo antoka sy mety raisina, raha jerena ny toe-pahasalamanao sy ireo fanafody raisinao.
Tylenol sy NSAIDs
Ny mpitsabo fanaintainana OTC dia afaka manampy amin'ny fampihenana ireo soritr'aretina mifandraika amin'ny aretina sinus. Tylenol (acetaminophen) dia analgesic izay manampy amin'ny fanaintainana ny fanaintainana sy ny tazo, raha Advil (ibuprofen), Aleve (naproxen), ary ny aspirinina dia fanafody anti-inflammatoire (NSAIDs).
Ny NSAID dia manampy amin'ny soritr'aretin'ny fanaintainana sy ny tazo, ary koa ny fivontosana / mamontsina. Ny NSAID dia afaka mifandray amin'ny zava-mahadomelina hafa, koa anontanio ny mpitsabo anao raha afaka mandray NSAID miaraka amin'ireo fanafody hafa alainao ianao. Ary koa, ny NSAIDs dia tsy tokony horaisina mandritra ny fotoana maharitra, koa miaraha manatona amin'ny dokotera raha toa ka tsy mahavaha ny sinusitis ity fomba fitsaboana ity ao anatin'ny 7-10 andro.
Inona no fanafody tsara indrindra amin'ny aretina sinus?
Ny fanafody tsara indrindra amin'ny fitsaboana ny aretina sinus dia nofaritan'ny dokoteranao ary miovaova arakaraka ny tranga. Etsy ambany, azonao atao ny mahita ny fampitahana ireo fanafody aretina mahazatra indrindra amin'ny sinus mba hianarana izay antenaina.
Fitsaboana tsara indrindra ho an'ny aretina sinus
Anaran'ny zava-mahadomelina Kilasy zava-mahadomelina Làlan'ny fitantanan-draharaha Dosis mahazatra an'ny olon-dehibe Vokany mahazatra
Flonase (fluticasone) Corticosteroid Fanasitranana orona Sifotra 2 isaky ny vavorona isan'andro Aretin'andoha, fandoroana orona na fahasosorana, orona orona, fanina
Sudafed (pseudoephedrine) Decongestant Am-bava Takelaka 2 isaky ny 4-6 ora; tsy mihoatra ny 8 takelaka isaky ny 24 ora Aretin'andoha, fanina, tsy fahitan-tory, fitaintainanana
Benadryl (diphenhydramine) Antihistamine Am-bava 1-2 kapsily (s) na takelaka isaky ny 4-6 ora; aza maka mihoatra ny in-6 ao anatin'ny 24 ora Fahasasarana, vava maina, fahamamoana
Mucinex (guaifenesin) Expectorant (amin'ny fitohanan'ny tratra / kohaka mamokatra) Am-bava Takelaka 1200 mg iray isaky ny 12 ora; tsy mihoatra ny takelaka 2 ao anatin'ny 24 ora; aza mitsako na manorotoro. Makà rano feno vera feno. Aretin'andoha, maloiloy, fanina, hatory
Ny fatra dia mamaritra ny dokoteranao mifototra amin'ny toe-pahasalamanao, ny valin'ny fitsaboana, ny taonanao ary ny lanjanao. Misy ny voka-dratsy hafa mety hitranga. Tsy lisitra feno io.
Inona avy ireo voka-dratsy ateraky ny fanafody aretina sinus?
Ny voka-dratsy mahazatra indrindra amin'ny fanafody aretina sinus dia tsy mitovy amin'ny karazana fanafody ampiasainao. Ny decongestants dia miteraka fanahiana, tsy fahitan-tory ary tsy fahazotoan-komana. Ny voka-dratsin'ny antibiotika dia misy fisalebolebo, fandoavana ary fivalanana. Antihistamines sy steroid dia mety miteraka fanina sy fikorontanana amin'ny torimaso.
Tsy lisitra feno amin'ny voka-dratsin'ny fanafody aretina sinus io. Raha sendra misy fiatraikany ratsy avy amin'ny fanafody na fitsaboana ianao, dia tsara kokoa hatrany ny manatona mpitsabo anao.
Inona avy ireo fanafody tsara indrindra any an-trano amin'ny aretina sinus?
Misy fanafody tsotra vitsivitsy ao an-trano izay mety hahomby amin'ny fanamaivanana ny fanaintainanao sy fanampiana anao hanadio ny sinus. Mba hisorohana ny fampiasana fanafody dia manandrama fametahana mafana eo amin'ny orona sy tarehy, ary asio fantsom-boalavo mamoaka rano mafana, hoy ny Dr. Elmore.
ny vahaolana namboarina ho an'ny fanondrahana orona dia iray amin'ireo fitsaboana tsara indrindra any an-trano amin'ny aretina sinus. Azonao atao ny mampiasa syringe na vilany neti handefasana vahaolana tsy misy ioda, soda, ary rano namboarina (na nandrahoina) nandrahoina tamin'ny vavorona mba hitazomana ny lalan'ny oronao. Na, azonao atao ny misafidy vokatra ao amin'ny farmasinao izay efa voaomana sy vonona hifangaro fonosana.
Ny fanafody any an-trano hafa momba ny aretina sinus dia misy fijanonan'ny rano amin'ny alàlan'ny fisotroana rano betsaka, ny fampiasana tsiranoka orona mamoaka decongestant ary ny fifohana setroka amin'ny fatana na amin'ny fandroana. Ny fanitsiana fomba fiaina sasany dia mety hampiroborobo ny fivoahan'ny orona toy ny fatoriana amin'ny lohanao avo amin'ny alina na ny fihazonana hamandoana mandeha ao an-tranonao hisorohana ny tontolo maina.
Mba hanamaivanana ny fanaintainana ao an-trano dia azonao atao ny mampiasa compresse mafana na mihinana fanafody fanaintainana be loatra mba hampihenana ny aretin'andoha sy ny fanaintainan'ny tarehy noho ny fitohanana.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny aretina sinus
Ahoana no ahafahanao manala haingana ny aretin'ny sinus?
Azonao atao ny mitsabo aretin-koditra ao an-trano na miaraka amin'ny fanafody OTC ho fanamaivanana ny soritr'aretina, sy / na fanafody antibiotika resahina, raha tratran'ny aretina mikraoba. Mijanona ho hydrated, mampiasa moisturizer, ary matory amin'ny hirika hanampiana haingana hamahana ny aretin'ny sinus anao. Miresaha amin'ny mpitsabo anao raha mila antibiotika ianao.
Inona no fitsaboana tsara indrindra amin'ny aretina sinus?
Ny fanondrahana orona sy ny fofona orona dia fitsaboana mahazatra amin'ny aretina sinus. Raha bakteria ny antony mahatonga ilay aretina, dia mety mila antibiotika ianao hanadiovana ilay aretina. Ny farmasinao dia mety ho loharano lehibe hanampy anao hisafidy OTC spray spray izay hanampy ny soritr'aretina manokana.
Azonao esorina ve ny aretina sinus raha tsy misy antibiotika?
Ny lozisialy sinus maro dia vokatry ny viriosy toy ny sery mahazatra ary tsy mila antibiotika hanaovana fitsaboana. Raha sendra soritr'aretina malemy ianao, ny fanafody OTC dia mety hanampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretinao mandra-pahazoanao salama tsara. Na izany aza, manatona ny mpitsabo anao raha miharatsy ny soritr'aretina na tsy mihatsara rehefa afaka fito andro, na raha marary mafy ianao na voan'ny tsindry mafy, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona.
Inona no mitranga raha avelanao tsy voatsabo ny aretina sinus?
Ny aretin'ny sinus sasany dia afaka manadio irery. Ny sasany kosa mety maharitra sy maharitra. Ny tsara indrindra dia ny mitsidika dokotera raha maharitra mihoatra ny 7-10 andro ny soritr'aretinao, na raha manana soritr'aretina mahery ianao.
Inona avy ireo fitsaboana mahomby ateraky ny aretina sinus?
Ny fampiasana compresse mafana, rano fisotro ary fampiasana vahaolana amin'ny fanondrahana orona dia fanafody an-trano mahomby ho an'ny aretin-sinus. Ireo fitsaboana ireo dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretina, fa raha bakteria ny antony mahatonga ny aretina, dia hanome fanafody antibiotika koa ny mpitsabo anao.
Inona no holazain'ny dokotera amin'ny sinusitis?
Raha bakteria ny antony mahatonga ny aretina dia dokotera no manome fanafody antibiotika. Raha malaza ny antony, dia mety hanome toro-hevitra momba ny decongestants OTC, NSAIDs, antihistamines, na stérapie an'ny dokotera ny dokoteranao.
Tokony hihinana antibiotika noho ny aretina sinus?
Ny antibiotika dia mandaitra fotsiny amin'ny aretina sinus vokatry ny bakteria. Hanampy anao hamantatra ny fomba fitsaboana tsara indrindra ny dokotera.
Ahoana no ahafahako mitsabo sinusitis ao an-trano?
Azonao atao ny mandray decongestants, antihistamines, na NSAID be loatra mba hampihenana ny soritr'aretin'ny fivalanan'ny sinosy ary hampiroborobo ny fivoahan'ny orona ao an-trano. Ireo fanafody OTC ireo dia hanome fanamaivanana ny soritr'aretina, fa tsy hitsaboana aretina mikraoba.
Loharano mifandraika amin'ny aretina sinus
Rahoviana no tena mila antibiotika noho io aretina sinus io ianao?
Inona no hatao amin'ny sinusitis
Ireto antidepressants ireto no fanafody malaza indrindra amin'ny SingleCare tamin'ny volana septambra
Tatitra: Ny vanim-potoanan'ny gripa dia voahitsaka afovoan'ny valanaretina COVID-19
tsara kokoa noho ny fanafody fametahana ny hatsiaka amin'ny tratra
inona no hohanina rehefa marary ianao
ohatrinona ny vitamina d raisiko
haavon'ny siramamy ao anaty ra ho an'ny diabetika karazana 2
firy isan-jaton'ny mponina no manana ocd